सरकारलाई हेप्नी ? हँ !
नवराज कुँवर काठमाडाैं, २० माघ
सुरुमै भनिहालौँ, म अरिङ्गाल क्लबको सदस्य होइन । तर, मान्छेहरूबाट सरकार हेपिएको देखेर म अत्यन्तै भावुक भएको छु । त्यसैले गाली गर्नेहरूलाई केही भन्न मन लागेको छ ।
मलाई ताजुब लाग्छ, यति राम्रो काम गरिरहेको सरकारलाई मान्छेहरू किन गाली गरिरहेका छन् ? यस्तै गालीको काउन्टर गर्न विचरा सरकारले एक मन्त्रीलाई मैदानमै उतार्नुपरेको छ ।
सरकारले कामै गरेन भन्छन् । सरकारले किन काम गरेको छैन ?
सरकारले धमाधम युवाहरूलाई खाडी मुलुक पठाइरहेको छ । यो विभागबाट त्यो विभाग, त्यो मन्त्रालयबाट यो मन्त्रालय गर्दै कर्मचारीलाई सरुवा गरिरहेको छ । कमिसन नै नलिई बढुवा र नियुक्ति गरिरहेको छ ।
तस्कर र माफियालाई ‘ठेगान’ लगाउन दिनरात सरकार वार्ता गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम् आफूविरुद्धका अभिव्यक्तिको ‘काउन्टर’ हानिरहेका छन् । मन्त्रीहरू खाना पनि नभनी उद्घाटन र शिलान्यासमा दौडिरहेका छन् ।
जनताले हराएकाहरूलाई सदनमा ल्याइरहेको छ, सत्ताधारी दलको पदाधिकारी बनाइरहेको छ ।
सरकारले कर उठाइरहेको छ । के यो काम होइन ? उठाउने कुरा कदापि चानचुने होइन । विदेश जाने क्रममा ठगिएका युवालाई सोध्दा थाहा हुन्छ, उठाउने कुरा कति कठिन छ । ए साँच्चि, युवालाई किन सोध्नु, एनसेलबाट कर उठाउन कति सकस परेको छ, सरकारलाई नै सोध्दा पनि हुन्छ । सरकार एनसेलबाट कर उठाउन पनि लागिरहेको छ । थाहा छैन कहिलेसम्म लाग्छ । बस्, लागिरहेको छ ।
सरकार कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको छ । यसलाई नेपालमा छिर्नै नदिन प्रयास गरिरहेको छ । अमेरिकाबाट एमसीसीका नाममा ५० करोड डलर ल्याउन लागेको छ । नेपाल घुम्न आऊ भनेर विदेशी पर्यटक बोलाइरहेको छ ।
सरकारले निर्मलाको हत्यारा खोजिरहेको छ । वाइड बडी घोटालामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । बालुवाटारका क्रेता र विक्रेताबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । यति मात्रै होइन, भित्रभित्रै मदन भण्डारीको हत्यारासम्म पुगिसकेको छ सरकार । ३३ किलो सुनकाण्डमा अब उन्मुक्ति दिन बाँकी को–को छन्, सरकारले उनीहरूको पहिचान गर्ने काम गरिरहेको छ ।
अझ कामै गरेन, सरकार ‘लण्ठू’ भयो रे, पारा हो ?
परीक्षा दिएपछि नतिजा कुर्न ६ महिना वा एक वर्ष पनि लाग्छ । यो त मान्छे र देशसँग जोडिएको मुद्दा हो । छिट्टै नतिजा खोज्नु मुर्खता होइन र ?
अदालतको प्रक्रिया र अपराधको अनुसन्धान भन्ने कुरा वर्षौं पनि लाग्न सक्छ नि ! यस्तो नेपालमा मात्रै हुने हो र ? भारतमा निर्भया हत्या काण्ड ८ वर्षपछि बल्ल टुंगो लागेको छ । निर्मला हत्या काण्डको उमेर त भर्खर डेढ वर्ष भयो । फेरि कुनै नेताका छोरीमाथि भएको अपराध हो र, अपराधी पत्ता लगाइहाल्नलाई ? सर्वसाधारणले त कुर्नुपर्‍यो नि । त्यति सजिलै न्याय कहाँ पाइन्छ ?
अमेरिकामा अर्को राष्ट्रपतीय चुनाव आउन लाग्यो । अघिल्लो निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पले रुससँग मिलेर हिलारीलाई हल्लाएको घटनामा अझै अनुसन्धान भइरहेको छ ।
त्यसैले अनुसन्धान र यसको आयु भन्ने कुरा ‘ग्लोबल ट्रेन्ड’ अनुसार हुन्छ ।
ठूल्ठूला देशको उदाहरण हेर्नु छैन । त्यसै सुनकाण्ड भन्या छ, वाइड बडी भन्या छ, दुइतिहाइको सरकारको मनोबल गिरा’को छ । अनि कसरी बन्छ देश ?
मान्छेले जे मन लाग्यो, त्यही गर्न थालेकाले नै हो, सरकारले बोल्यो कि थुनिहाल्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्या’को । मान्छेहरू ‘यस्तो विधेयक ल्यायो’ भनेर सरकारलाई गाली गर्छन् । विचरा, सरकारमा बसेकालाई चाहिँ कम पीर छ र ! अबको चुनावमा जनताले उत्तानो पारिदिए भने ती कानुन सबै उनैका टाउकामाथि थुप्रिने त हुन् नि ।
सरकार समृद्धिको यात्रामा छ । यतिबेला सरकारलाई गाली गर्ने होइन, ताली बजाएर प्रोत्साहन गर्ने हो । तर, मान्छेहरू कुरै बुझ्दैनन् । त्यही भएर सरकारले कान सुन्नै छाडेको छ ।
यत्रो समृद्धिको महान् यात्रामा हिँडेको सरकारलाई हेप्नी ?
बर्खा लाग्यो, सडक हिलो भयो, खाल्डो भयो भनेर सरकारलाई गाली गर्छन् । हिउँद लागेपछि धुलो हुन्छ, सरकारलाई नै सराप्छन् । ए बाबा ! धुलो र खाल्डो भएको बाटो किन हिँड्नु ?
कर्मचारी र ठेकेदारले मुटु मिचेर कुनै कुनै ठाउँमा चिल्लाचिल्ला सडक बनाइदिएका छन्, त्यही बाटो हिँड्नु नि ! विकल्पै छैन भने हिलोतिर हेरेर किन हिँड्नु, माथि–माथि आकाशतिर हेरेर हिँड्नु नि । सरकार जो समृद्धिको महान् यात्रामा छ ।
यो बेला लक्ष्मण गाम्नागेको एउटा कविताको याद आउँछ ।
चन्द्रमा छुनु छ
सबैले शीर ठाडोठाडो गर्नू
भुइँतिर हेरेर धुलो उड्यो नभन्नू
हिलो भयो नभन्नू
महँगी, खानेपानी र रोगका कुरा नगर्नू
पहिरो, बाढी र भोकका कुरा नगर्नू
महान् यात्राको शुभसाइतमा
मसिना थाङ्ने कुरा गर्दै नगर्नू
ऐया आत्थो र माग्ने कुरा गर्दै नगर्नू
महानगरलाई अबगालमा पार्न
मध्यबर्खामा हिले सडकबाट किन हिँड्नु ?
बर्खा सकिएर खाडलहरू प्रस्ट देखिन्छन्
अनि मात्र हिँड्नू
सम्भावित समृद्ध मुलुकका नागरिकहरूले
छाती अलि फराकिलो बनाउनू
शीर ठाडो गरेर सरकारले जस्तै माथिमाथि हेर्नू
समृद्धिको महान् यात्रामा निस्केको सरकारलाई झिनामसिना कुरामा गाली गरेर निरुत्साहित गर्ने ? मान्छेहरू सरकारको जस्तै ठूलो छाती किन पार्न सक्दैनन् ? जहाँ अपराधीले पनि न्यानो गरी बस्न पाओस्, खान पाओस्, रमाउन पाओस् । त्यो छाती जहाँ असन्तुष्टिको कुनै गुञ्जायस नहोस्, आक्रोशको कुनै बाछिटा नपरोसस् ।
कवि गम्नागेले ठीकै त भनेका छन् :
समृद्धिको यात्रामा केवल समृद्धि सम्झिनु
मूल्यवृद्धि किन सम्झिनु ?
फेवा ताल सम्झिनु
महेन्द्र ताल सम्झिनु
महामारी र अनिकाल किन सम्झिनु ?
देश होइन, नेता समृद्ध भए भनेर गाली गरिरहेका छन्, मान्छेहरू । भोको मान्छेले भारी बोक्न सक्छ ? समृद्धिको अभिभारा कम भारी कुरा हो ? यसका लागि पहिला समृद्धिका ठेकेदारहरू मोटाउन परेन ? बुझ्दै नबुझी सरकारलाई गाली गर्‍या छ, समय बर्बाद पार्‍या छ ।
ठूलाले सानालाई सपार्ने हो सराप्ने होइन । विश्वमा कहीँ पनि जनताभन्दा माथि सरकार हुँदैन । त्यसैले सरकारलाई जनताले सपार्ने हो ।
तर, अहिले दुईतिहाइ नजिकको सरकार छ । यस्तो बेला सरकारलाई सपार्न नसकिएला । त्यसैले यस्तो सरकारको त आरती उतार्नुपर्छ । अहिले सरकार चलाउनेहरूले अर्को पटक चुनावबाट समृद्धिको यस्तो भारी बोक्ने जिम्मेवारी लिन नपरोस् भनेर कामना गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २०, २०७६, ०१:११:००
बैठक कोठाभित्रै सुरुङ खन्ने ‘रत्न’ गुमेको दिन
सम्झनामा २६ चैत : अनारसको बिउ जिन्दावाद !
राहतको अपेक्षा गरेका जनतालाई नेताको अनुहार उपहार !